Ahoana ny fomba fanaovana sofa amin'ny paleta ary ny fomba fanodinana ilay taloha - Ikkaro
firosoana >> Cómo hacer >> Ahoana ny fomba fanaovana sofa amin'ny paleta
Paleta 6 euro
Pillet cushions (novidina tao amin'ny magazay)
loko sy / na verinia
Ny tena zava-dehibe dia ny paleta. Ho an'ny sofa misy anay dia nampiasa paleta 6 euro izahay. 5 marina satria tsy nanana bebe kokoa izahay fa miandry ny farany ho entina aty aminay.
Mampiasa paleta Euro izahay, toy ny olon-drehetra ihany, satria manana refy mahazatra. Izay paleta euro fantatrao dia mirefy 1,2m x 0,8m x 0,144m. Azonao atao ny mividy azy ireo amin'ny tanana vaovao na faharoa na raha mahafantatra olona afaka manala azy ireo amin'ny asany ianao dia mety izany.
Misy iray izay tsy paleta Euro, paleta mahazatra izy io fa mitovy fandrefesana ihany, ka heverinay fa mitombina izany ary hampiasainay mitovy. Ny paleta Euro dia lasa lafo be.
Tamin'izany fomba izany no nanangonako sofa 2,4 metatra, izay ampy handry mangina fotsiny.
Alohan'ny hampiasana azy ireo dia tsy maintsy tsaboina izy ireo. Aloavy tsara aloha izy ireo, mba tsy hisy mpampisaraka. Ary avy eo azonao atao ny mandoko azy ireo na mampiasa varnish hiarovana azy ireo ary hivoaka eny ivelany izy ireo.
Ny fomba fototra hanangonana ny sofa dia amin'ny alàlan'ny fametahana paleta 2 amin'ny gorodona ary amin'ny fampiasana ampahatelony toy ny backrest, araka ny hita eo amin'ny sary.
Tsy niaraka tamin'izy ireo aho. Malalaka izy ireo. Raha tianao ny rafitra mitambatra henjana dia afaka mampiasa lakaoly sy bolt ianao. Na asio armrests sasany aza izay manome henjana kokoa azy.
Ny rafitray, ny tsotra indrindra misy, dia mamela antsika hamindra na hanala azy amin'ny fotoana rehetra.
Manomboka eto dia azonao atao ny manamboatra ny fiovaovana rehetra azonao eritreretina. Misy ireo izay manampy kodiarana hahafahana manetsiketsika azy, izay mampiasa paleta fanampiny ary mamorona armrests amin'ny sisiny.
Amin'ny toerana maro dia hitako fa mankany amin'ny magazay izy ireo izay manapaka ny habeny, sns. Fa any amin'ny fivarotana haingon-trano, bazaara, magazay sinoa, sns., Mazàna dia manana kitapo toa ilay sary etsy ambony voaomana ho an'ny paleta, miaraka amin'ny fandrefesana lavorary.
Ny fitambaran'ireo ondana 4 dia mitentina 29 €
Fanodinana ny sofa taloha
Io no fananako. Na dia toa seza lava aza io, dia ny zoron'ny seza no nampiasainay tsy miankina.
Nanomboka nanala azy io aho satria tsy nety tao anaty fiara ary tiako hoentina any amin'ny park eco ary tamin'ny farany dia nanararaotra saika ny zava-drehetra aho.
Hatrany am-piandohana dia nilaza aho fa hitandrina ny lamba ambadika satria manampy ahy io manaova zaridaina mitsangana miaraka amin'ny paleta. Izy io no ampiasaina ho ambadika manampy ny tany sy ny zavamaniry.
Ampianariko amin'ny antsipiriany bebe kokoa izy
Ary nesoriko io lamba io ary hitako ny atin'ny sofa dia tsy zakako. Ny chassis iray manontolo, ny firafitry ny sofa dia vita amin'ny ala matevina.
Ka nanomboka nanala azy tanteraka aho.
Amin'ny sary etsy ambony dia afaka jerenao ireo sombin-javatra rehetra izay namboariko indray. Saika ny zava-drehetra dia hazo avy amin'ilay sary izay tsy maintsy vitako amin'ny fanesorana sombin-damba sy foto-tsakafo ary fametahana azy. Avy eo natahoriko ihany koa ilay lamba noresahiko sy fehin-kibo vitsivitsy izay nampiasaina ho an'ny seza. Oh, ary ireo mpanafika tsy solafaka.
Sokajy Cómo hacer Tags Fanaka misy paleta, Paleta sy DIY Ticket navigation
Fanehoan-kevitra 2 momba ny "Ahoana ny fomba fanaovana sofa amin'ny paleta"
3 septambra 2021 amin'ny 12:23 alina
Ny sezalava pallet dia fototra, na dia heveriko fa izany no tadiaviko hahafahako mamindra / manala azy. Ny tsy hitako dia ny ondana amin'ny vidiny na aiza na aiza ...
3 septambra 2021 amin'ny 12:26 alina
Eny, tianay ny hanao azy io ho tsotra araka izay azo atao ary io no tena fototra :) Araka ny nolazaiko fa nahita azy io tao amin'ny bazary sinoa izahay.
2 Ireo ondana
3 Fanodinana ny sofa taloha